KIA ၏ ခါရာတောင်ကုန်းကို အစိုးရတပ် ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင် | ဧရာဝတီ
KIA ၏ ခါရာတောင်ကုန်းကို အစိုးရတပ် ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်
ဧရာဝတီ| January 16, 2013 | Hits:2,040
7 | | ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အခြေစိုက်ထားသည့် ခါရာတောင်ကုန်းတို့ကို အစိုးရတပ်များက ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုက်လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း စစ်မြေပြင်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ဧရာဝတီ သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ အစိုးရတပ်က KIA တပ်ဖွဲ့များကို တိုက်လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ပြီး လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ မီးခိုးလုံးများကို မြင်တွေ့နေရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ခါရာတောင်ကုန်းသည် KIA ဗဟိုဌာနချုပ် တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ရှိပြီး ယမန်နေ့ကလည်း တိုက်လေယာဉ်များဖြင့်ပါ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဟီလာရီ သောကြာနေ့ တွေ့မည်
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား တက်မည်
၂၀၁၄ ၌ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂ၏ ပထမဆုံး သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်မည်
အစားအသောက် ၂ မျိုး စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Chinlay January 16, 2013 - 8:38 pm	Winning the heart of the people is better than occupying the mountain.
Reply	Hkun January 18, 2013 - 9:57 am	Never get the Forever Peace.This is the opposite of Panlaon Aggrement.
Reply	ကောင်းစေချင် January 18, 2013 - 8:22 pm	စစ်တိုက်တာအသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ်ရတာ၊သက်တောင့်သက်သာနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူမှပျော်လွန်းလို့တိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူး၊ စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆို
တာကလည်း နောက်ကွယ်ကလိမ်ညာသတင်းတွေ လူတွေကိုမထိ ထိအောင်လုပ်ပြီးဇတ်နာတဲ့
သတင်းတွေထုတ်၊လူသားတံတိုင်းလုပ် အကြံအဖန်လုပ်နေတာတွေ အများကြီး၊ KIAကထုတ်ပြန်တာလောက်ကြည့်ပြီး၊ စစ်တပ်ကပဲ လွန်ကြူးနေသလိုလို မတရားဇောင်းတင်းပဲ
လုပ်နေသလိုလို ပေါ်ပင်သံယောင်လိုက်နေကြတယ်။လေယာဉ်သုံးတယ်တဲ့၊ မာလီမှာ သူပုန်တွေကို ပြင်သစ်က တိုက်နေတာရောလေယာဉ်မဟုတ်လား။ မီဒီယာအင်အားကြီးတွေက
Reply	TL January 20, 2013 - 6:12 am	Yes, I fully agreed with you.
Reply	thettheteinaing January 20, 2013 - 11:33 pm	အခလေးတင်face book မှာတက်လာတဲ့news ကချင်ဘက်ကပြောတာနေမှာပါ ခါယာတောင်ကုန်းကိုတက်လာတဲ့အင်အား(100) ကို သူတို့ ကဆီးပစ်တာ ကျန်ခဲ့တဲ့ Body တွေကို မီးသဂြိင်္ုံတ်ဘို့ လုပ်နေတယ်လို့ ဖတ်ရတယ် ကိုယ့်အနေန့ဲလုံးဝကြေကွဲတာအမှန်ပါ ကိုယ့်အမျိုးတစ်ယောက်လောက် အဲဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုသူတွေအတွက် အရမ်း
သမ္မတအိုဘားမား ပါရီမြို့ရှိ ဘာတာကလန်ကဇတ်ရုံသို့ သွားရောက်
ရုရှားလေယာဉ်မှူး ရုပ်အလောင်း တူရကီ လွှဲပေးမယ်
သမ္မတ၊ ကာချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွေ့မည်